Gịnị mere My iPhone App Store anaghị arụ ọrụ Ma ọ bụ oghere? Nke a bụ ndozi ahụ! - Iphone
ụlọ ahịa ngwa iphone anaghị ebugo
nri dị nro iji ihe nkwado eme ihe
esi gbanyụọ bọtịnụ ụlọ ịma jijiji iphone 7
iphone abanyela na ọ gaghị ebupụta
Gịnị mere My iPhone App Store anaghị arụ ọrụ Ma ọ bụ oghere? Nke a bụ ndozi!
Nụrụ ntị banyere ngwa ọhụrụ dị jụụ ma ị dịla njikere ịnwale ya, mana mgbe ị mepere App Store ka ibudata ya, ihuenyo ahụ bụ oghere ma ọ bụ rapaara loading . Kwenyesiri ike na ọ bụghị nsogbu akụrụngwa, n'ihi na ngwa ngwa ndị ọzọ niile na-arụ ọrụ zuru oke-ya mere ọ ga-abụrịrị ihe ọzọ. N'isiokwu a, m ga-akọwa gịnị mere iPhone App Store anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ oghere , na otú idozi nsogbu otú App Store amalite loading ọzọ na iPhone gị, iPad, ma ọ bụ iPod.
Ndozi: Ihe ị ga - eme mgbe ụlọ ahịa ngwa anaghị arụ ọrụ na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod
Aga m eji iPhone maka ije a, mana usoro maka idozi Storelọ Ahịa App na iPad na iPod bụ otu ihe ahụ. Ọ bụrụ n’inwe iPad ma ọ bụ iPod, nweere onwe gị iji dochie ngwaọrụ gị mgbe ọ bụla ị hụrụ iPhone N'isiokwu a.
Mechie ma meghee App Store App
Mgbe ụfọdụ obere nsogbu na App Store nwere ike igbochi ya ijikọ na ịntanetị, ma mgbe nke ahụ mere, ọ gaghị ebuba ma ọlị. Ihe mbụ ị ga-anwa ime bụ imechi ngwa App Store ma mepee ya ọzọ.
Iji mechie Storelọ Ahịa, Pịa bọtịnụ Home gị iPhone imeghe ngwa switcher. Ọ bụrụ na iPhone gị enweghị bọtịnụ Home, swipe si na ala gbadaa na etiti ihuenyo ahụ. Jide mkpịsị aka gị n'etiti ihuenyo ahụ ruo mgbe ngwa ngwa switcher ga-emepe.
Nwere ike ị swipe azụ na-aga ịhụ niile ngwa na-emeghe na gị iPhone. Mgbe ịchọtara Storelọ Ahịa App, jiri mkpịsị aka gị na- swipu ya n'elu ihuenyo . Ọ bụghị echiche ọjọọ ka ị mechie ngwa niile ahụ, naanị ma ọ bụrụ na otu dị iche adaba.
Banyere Ngwa Mmechi Na iPhone
Ekwadoro m imechi ngwa gị niile otu ugboro kwa ụbọchị ma ọ bụ abụọ, n'ihi na n'agbanyeghị ihe ị nuru, ọ bụ bu ezi maka gị iPhone ndụ batrị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụtakwu ihe, gụọ isiokwu anyị na-egosi gịnị mere ịmechi ngwa iPhone gị bụ ezigbo echiche , ma lelee vidio anyị maka ihe ndị ọzọ iPhone batrị Atụmatụ !
Kọwaa Cache Storelọ Ahịa App
Ọ bụghị ọtụtụ mmadụ maara etu esi eme ya, mana ihichapụ oghere Storelọ Ahịa App nwere ike idozi ụdị nsogbu niile na Storelọ Ahịa App na iPhone gị. Ihichapu Storelọ Ahịa App, kpatụ ugboro 10 na akara ngosi taabụ ọ bụla na ala ihuenyo App Store.
Ka ihe atụ, i nwere ike enweta ugboro 10 na Taa taabụ iji kpochapụ oghere. Storelọ Ahịa App agaghị ebugote, ya mere, mechie ma meghee ngwa ngwa ngwa ahụ ma emechaa.
Lelee Peeji Ọnọdụ Ọnọdụ sistemụ Apple
O nwere ike ịbụ na Storelọ Ahịa App anaghị arụ ọrụ na iPhone gị n'ihi esemokwu na sava Apple. Lelee Ibe Ọnọdụ sistemụ Apple ma hụ na ntụpọ ndị ahụ na-acha akwụkwọ ndụ, ọkachasị nke mbụ na-esote App Store.
Ọ bụrụ na ntụpọ a ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ abụghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, Apple na-enwe ụfọdụ nsogbu na ọ dịghị ihe dị njọ na iPhone gị. Apple na-edozi nsogbu ndị a ngwa ngwa, yabụ ihe kacha mma ị ga-eme bụ inwe ndidi ma lelee ma emechaa.
Lelee Datebọchị na Oge Ntọala gị
Ọ bụrụ na edoghi ntọala Datebọchị & Oge nke iPhone gị nke ọma, ọ nwere ike ibute ụdị nsogbu niile na iPhone gị - gụnyere nke a! Mepee Ntọala wee pịa izugbe . Mgbe ahụ, pịa &Bọchị & Oge ma hụ na mgba ọkụ na-esote ka ịtọọ na akpaghị aka.
Mgbe Storelọ Ahịa App agaghị ebu, ihe ọzọ anyị kwesịrị ịlele bụ njikọ iPhone gị na ịntanetị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ngwa ndị ọzọ ma ọ bụ weebụsaịtị na-arụ ọrụ na ngwaọrụ gị, nye ya nke a. Storelọ Ahịa Ngwa na-eji teknụzụ dị iche iche karịa ngwa na weebụsaịtị ndị ọzọ - anyị ga-ekwu maka nke ahụ ma emechaa.
Ọ bụrụ na ị nọworị na Wi-Fi, anyị ga-agbanyụ ya wee mepee Storelọ Ahịa ngwa iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ. Mgbe ị gbanyụrụ Wi-Fi, iPhone gị ga-agbanye na njikọ data nke ikuku ya, nke enwere ike ịkpọ LTE, 3G, 4G, ma ọ bụ 5G, dabere na ụgbọelu ikuku gị na ike mgbaama.
Ọ bụrụ na iPhone ejikọghị na Wi-Fi, anyị ga-ejikọ na netwọk Wi-Fi dị iche iche ma mepee Storelọ Ahịa App ọzọ.
Etu esi anwale njikọ nke iPhone gị na ntanetị
Ọ dị mfe ịnwale njikọ iPhone gị na ịntanetị. Nke mbụ, mepee Ntọala na pịa Wi-Fi .
Ga - ahụ mgba ọkụ na - esote Wi-Fi n’elu ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na mgba ọkụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (ma ọ bụ na), mgbe ahụ, gị iPhone na-ejikọta Wi-Fi netwọk n'ebe ọ bụla o kwere omume. Ọ bụrụ na mgba ọkụ bụ isi awọ (ma ọ bụ gbanyụọ), iPhone gị anaghị ejikọta Wi-Fi na naanị ijikọ na ịntanetị site na iji data cellular site na atụmatụ ekwentị gị.
IPhone gị ga - ejikọ na netwọk Wi-Fi naanị ma ọ bụrụ na ijikọ ha n'oge gara aga - ọ gaghị 'naanị ijikọ' na netwọk Wi-Fi ọhụrụ na ya.
Ọ bụrụ na ị na-agabiga nkwenye data kwa ọnwa gị na onye na-ebu ikuku gị, nke a nwere ike bụrụ nsogbu - lelee isiokwu anyị akpọ Gịnị na-eji Data On iPhone? iji mụtakwuo, ma ọ bụ lelee UpPhone's atụmatụ tụnyere ngwá ọrụ ịchọta a mma ekwentị atụmatụ na ndị ọzọ data.
Kpatụ mgba ọkụ na-esote Wi-Fi iji gbanyụọ ya. Kpatụ mgba ọkụ ọzọ iji gbanye Wi-Fi, wee pịa aha netwọk ịchọrọ ijikọ iPhone gị.
Olee Otú M Mara Ọ bụrụ na My iPhone na-ama jikọọ na Wi-Fi?
Ọ bụrụ na ị na-ahụ a-acha anụnụ anụnụ checkmark na-esote aha a Wi-Fi na netwọk, gị iPhone jikọọ na netwọk.
Mgbe ụfọdụ mfe mbipụta nwere ike ofu site mbịne gị iPhone anya na azụ na. Iji mee nke a, pịa ma jide bọtịnụ ike (a maara dị ka ụra / ụra bọtịnụ) ruo mgbe 'slide ka ike gbanyụọ' na-egosi na ihuenyo. Ọ bụrụ na ị nwere iPhone na ID ihu, pịa ma jide ya bọtịnụ n'akụkụ na bọtịnụ olu ruo mgbe “slide ka ike gbanyụọ” pụtara.
Swipe gburugburu na akara ngosi ike gafee ihuenyo iji gbanyụọ iPhone gị. Gị iPhone nwere ike na- 30 sekọnd gbanyụọ kpamkpam.
Na-atụgharị gị iPhone azụ, pịa ma jide ike ma ọ bụ akụkụ button ruo mgbe Apple logo na-egosi na ihuenyo. Mepee Storelọ Ahịa App ka ị hụ ma ọ na-arụ ọrụ.
Emelite gị iPhone nwere ike nwere ike idozi a software nke na-egbochi ndị App Store na-arụ ọrụ nke ọma. Mepee Ntọala wee pịa General -> Mmelite ngwanrọ . Kpatụ Ibudata na Wụnye ma ọ bụ Wụnye Ugbu a ọ bụrụ na mmelite dị.
ịrọ nrọ oke
Mgbe emesịrị iPhone gị, mepee Storelọ Ahịa ma hụ ma edozi nsogbu ahụ. Gaa na nzọụkwụ ọzọ ma ọ bụrụ na Storelọ Ahịa App ka dị oghere ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ.
Banye na Storelọ Ahịa Ngwa ma laghachi na
Mgbe ụfọdụ, nsogbu na-ebu App Store nwere ike idozi site na ịpụ na azụ na Apple ID gị. Nwere ike ịnọ na-eche etu ị ga - esi pụọ na Storelọ Ahịa App n’enweghị ike ịnweta n'ime Storelọ Ahịa Ngwa, mana ọ dị mfe - naanị soro usoro ndị a:
Nke mbụ, mepee Ntọala kpatụ aha gị n’elu ihuenyo ahụ. Pịgharịa gaa na ala Pụọ .
Ugbu a, ị pụọla, oge eruola ịbanye. Pịa ya Banye bọtịnụ na tinye Apple ID na paswọọdụ .
Gbaa mbọ hụ na Port 80 na 443 Emepere
Agaghị m enweta teknụzụ ebe a, mana ezuola ikwu na iPhone gị na-eji ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri iji jikọọ na ịntanetị. Dị ka Apple Apple ndepụta ọdụ ụgbọ mmiri ha na-eji , ọdụ ụgbọ mmiri 80 na 443 bụ ọdụ ụgbọ mmiri abụọ ha na-eji maka ijikọ na App Store na iTunes. Ọ bụrụ na egbochiri otu n’ime ọdụ ụgbọ mmiri ndị a, App Store nwere ike ọ gaghị ebu ibu.
Kedu ka m ga-esi enyocha ma ọdụ ụgbọ mmiri ọ dị?
Ọ bụrụ na ị na-agụ edemede a na otu iPhone ị na - enwe nsogbu, ọdụ ụgbọ mmiri 80 na - arụ ọrụ nke ọma, n'ihi na iPhone gị jikọtara na payetteforward.com na iji ọdụ ụgbọ mmiri 80. Iji lelee ọdụ ụgbọ mmiri 443, gaa Google . Ọ bụrụ na ọ na-ebu ibu, ọdụ ụgbọ mmiri 443 na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na otu ma ọ bụ nke ọzọ ebughi ibu, gaa na ngalaba akpọrọ Tọgharia Ntọala Ntọala n'okpuru.
Ichefu netwọk Wi-Fi gị
Ichefu netwọk Wi-Fi gị ga-eme ka iPhone gị nwee njikọ ọhụrụ na netwọkụ. Mgbe ijikọ iPhone gị na Wi-Fi maka oge mbụ, ọ na-echekwa ozi gbasara otu esi jikọọ na netwọkụ ahụ. Ichefu netwọk na-enye ya na iPhone gị mmalite ọhụụ zuru oke, nke nwere ike idozi nsogbu njikọta.
Mepee Ntọala wee pịa Wi-Fi . Enweta na-acha anụnụ anụnụ 'i' ọmụma akara ngosi na nri nke gị Wi-Fi na netwọk, mgbe ahụ enweta Chefuo Network a . Kpatụ Chefuo iji gosi mkpebi gị.
Laghachi na Ntọala -> Wi-Fi ma kpatụ netwọk gị n'okpuru Netwọk ndị ọzọ . Tinyegharịa okwuntughe Wi-Fi gị ka njikọta na ntanetị.
Ọ bụrụ na Storelọ Ahịa App ka na-arụ ọrụ na iPhone gị, ọ bụ oge Tọgharia Ntọala Ntọala. Tọgharia Ntọala Ntọala 'echefuru' netwọ Wi-Fi niile ị jikọtara, yabụ echefula ịtinye na netwọk Wi-Fi n'ụlọ gị Ntọala -> Wi-Fi mgbe gị iPhone reboots. Ntọgharị a na-eweghachite ntọala Cellular, Bluetooth na VPN niile na nrụpụta ụlọ ọrụ. Tọgharia Ntọala Ntọala abụghị mgbọ anwansi, mana ọ na-edozi ọtụtụ nsogbu njikọ ịntanetị na iPhones.
Iji tọgharịa Ntọala Ntọala na iPhone gị, mepee Ntọala na pịa General -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala Ntọala . Tinye passcode iPhone gị, wee pịa Tọgharia Network Ntọala ọzọ iji gosi na nrụpụta.
Ndabere gị iPhone
Tupu ịkwaga n'elu nzọụkwụ nchọpụta nsogbu ọzọ, anyị na-akwado ịchekwa ndabere nke iPhone gị. Ndabere bụ nnomi nke data niile dị na iPhone gị, gụnyere kọntaktị gị, foto na ngwa gị. E nwere ụzọ atọ dị iche iche iji kwado iPhone gị, anyị ga-agakwa gị site na usoro ọ bụla dị n'okpuru.
Ichekwa ndabere gị iPhone Iji iCloud
Meghee Ntọala .
Kpatụ iCloud .
Kpatụ Ndabere .
Jide n'aka na mgba ọkụ na-esote iCloud ndabere bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke na-egosi na ọ dị.
Kpatụ Zọpụta Ugbu a .
Mara: Ekwentị gị kwesịrị ijikọ Wi-Fi ka ndabere iCloud.
Ichekwa ndabere gị iPhone Iji iTunes
Ọ bụrụ na ị nwere PC ma ọ bụ Mac na-agba ọsọ macOS 10.14 ma ọ bụ karịa, ị ga-eji iTunes mgbe ị na-akwado iPhone gị na kọmputa gị.
Jikọọ iPhone na kọmputa gị site na iji eriri USB.
Mepee iTunes na PC ma obu Mac gi.
Pịa na akara ngosi iPhone n'akụkụ akuku aka ekpe nke iTunes.
N'okpuru Ndabere , pịa gburugburu dị n'akụkụ Kọmputa a na igbe dị n’akụkụ Encrypt iPhone ndabere .
Ọ bụrụ na kpaliri, tinye kọmpụta kọmputa gị iji zoo ndabere.
Pịa Zọpụta Ugbu a .
Ichekwa ndabere gị iPhone Iji Finder
Ọ bụrụ na ị nwere Mac na-agba ọsọ macOS 10.15 ma ọ bụ karịa, ị ga-eji Finder mgbe ị na-akwado iPhone gị na kọmputa gị.
Jikọọ iPhone na Mac gị site na iji eriri USB.
Mepee Ihe Nchọta.
Pịa na iPhone gị n'okpuru Ọnọdụ n'aka ekpe nke aka Finder.
Pịa gburugburu dị n'akụkụ Zọpụta data niile dị na iPhone gị na Mac a .
Lelee igbe dị n'akụkụ Zoo nkwado ndabere na mpaghara na-abanye na gị Mac paswọọdụ.
DFU Weghachi gị iPhone
A DFU weghachi bụ ikpeazụ nzọụkwụ ị pụrụ ime iji kpamkpam achị si a software nsogbu. All koodu na gị iPhone ego n'anya na-ihichapu na reloaded, akara site na akara. Mgbe weghachite zuru ezu, ọ ga - adị ka ị na - ewepụ iPhone gị na igbe ahụ maka oge mbụ.
Jide n'aka na ị nwere nkwado ndabere iPhone tupu ịme ihe a! Enweghị nkwado ndabere, ị ga-atụfu ozi niile echekwara ugbu a na iPhone gị. Mgbe ị dị njikere, lelee isiokwu anyị na olee otú DFU weghachi gị iPhone .
Etu ị ga - esi nweta enyemaka na Apple mgbe ụlọ ahịa ngwa anaghị arụ ọrụ
Mepee ngwa Mail ma ọ bụ Safari ma gbalịa iji weebụ. Nwere ike ịnyagharịa na weebụsaịtị ma ọ bụ budata email gị? Ọ bụrụ na ịgbaso usoro niile dị n'elu na ịntanetị na-arụ ọrụ, enwere ohere 99.9% nsogbu ahụ metụtara ngwanrọ. Ebe kachasị mma ịmalite maka inweta nkwado sọftụwia site na Apple .
Ọ bụrụ na iPhone gị na-eme ihe dị egwu ma ọ bụ mebiri emebi n'oge na-adịbeghị anya na Storelọ Ahịa App agaghị arụ ọrụ, enwere ike ịnwe ihe ọzọ na-aga. Nhọrọ kachasị mma ị nwere bụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ Apple mee ndokwa na Ogwe Genius, ma ọ bụ jiri ọrụ ndozi mail ha.
iPhone App Store: Na-arụ ọrụ Ọzọ!
Dị ka anyị hụworo, enwere otutu nke ihe kpatara na iPhone App Store nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ, mana ya na obere ndidi, ejiri m n’aka na ị nwere ike idozi ya. Ndị ọrụ Apple na-anụ, 'Applọ Ahịa Ngwa m bụ oghere!' oge niile, na dị ka anyị tụlere, ọ bụ nsogbu ngwanrọ 99% nke oge. Ugbu a ọ ga-amasị m ịnụ n'ọnụ gị: Kedu azịza mere ka Storelọ Ahịa ahụ malite ibudata ọzọ na iPhone gị? Mee ka anyị mara na ngalaba nke dị n'okpuru.